Tsy manana fidirana IFTTT |. Intsony ny Launch Center Pro Vaovao IPhone
Tsy manana fampidirana IFTTT intsony ny Launch Center Pro
Vaovao ratsy ho an'ny fampiharana fampiharana mandeha ho azy ho an'ny iOS. Ny Launch Center Pro, iray amin'ireo malaza indrindra sy malaza indrindra, dia nanambara fa tsy hanana fidirana IFTTT intsony. Raha ny antony nanamafisan'ilay programmer azy dia tsy mihemotra ny toerany ary fanapahan-kevitra farany.
Andeha hiverina amin'ny volana aprily 2013 isika tamin'izany fotoana izany dia nalain'ny Facebook ny Parse, orinasa teknolojia kely iray izay nanam-pahaizana manokana momba ny fandaharana ao ambadiky ny sehatry ny fampiharana finday. Izy ireo dia nikarakara ny fampandrosoana ny zava-drehetra ahafahana mampiasa rindranasa iray. Ny fividianana dia nikatona tamina vola manodidina ny 85 tapitrisa dolara ary midika izany fa hampiditra tsikelikely ao amin'ny rafitry ny Facebook i Parse. Ity ny votoatin'ny raharaha; Ankehitriny i Parse dia lasa ampahany amin'ilay goavambe manga ary noho izany dia tsy hiasa amin'ny antoko fahatelo intsony. Iray amin'ireo antoko fahatelo ireo ny Launch Center Pro.
Toy izao no nanazavan'izy ireo izany tao amin'ny tranonkalany: "Parse dia nanome anay fotoana hirotsahana serivisy tranonkala sarotra nefa tsy mila miahiahy momba ny latsaka, ny filaminana, ny fanavaozana ary ny karazana fanamby rehetra tonga amin'ny serivisy amin'ny Internet."
Ankehitriny izy ireo dia eo amin'ny toeran'ny fifampiraharahana mivantana amin'ny IFTTT. Saingy tsy izay ihany, satria araka ny voalaza tao amin'ny tranonkalany dia hanomboka handoa an'ity serivisy ity izy. Miaraka amin'ny fanavaozana izay efa ao amin'ny App Store, IFTTT dia tsy ho tohanana amin'ny fomba ofisialy intsony, satria na dia nisy aza ny fikafika eken'ny antoko roa tonta dia tsy nahomby izany.
Raha iray amin'ireo voakasik'ity fanovana ity ianao dia misy fomba hafa azo soloina, toa ny Workflow na ny application IFTTT ho an'ny iOS.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Tsy manana fampidirana IFTTT intsony ny Launch Center Pro
Apple dia manavao ny AirPods amin'ny version 3.5.1
Apple dia mihevitra ny handray fepetra ara-dalàna amin'i Trump sy ny baikon'ny fanoherana ny fifindra-monina